१ 192.168.8.1 २.१XNUMX..XNUMX.१ - वाइफाइ हटस्पट के हो?
WiFi हटस्पट नेट एक्सेस पोइन्टहरू हुन् जसले तपाईंलाई तपाईंको पीसी, स्मार्टफोन वा कुनै उपकरणको साथ वाइफाइ नेटवर्कमा लिंक गर्न अनुमति दिन्छ जब तपाईंको अफिस वा घर नेटवर्कबाट टाढा हुन्छ।
असंख्य व्यवसायहरू, शहरहरू, र अन्य प्रतिष्ठानहरूले वाइफाइ प्रस्तुत गर्न शुरू गर्यो हटस्पट यसले मानिसहरूलाई वायरलेस मोबाईल नेटवर्कहरू भन्दा छिटो नै छिटो, छिटो इन्टर्नेट जडानहरूमा जडान हुन मद्दत गर्दछ।
अझै वाइफाइ हटस्पट के हो र यसले कसरी कार्य गर्दछ? हटस्पटहरू सुरक्षित छन्? तपाईले तल चाहानु भएको सबै जानकारीहरू पढ्नुहोस्।
वाइफाइ हटस्पटले कसरी काम गर्दछ?
एक समुदाय वाइफाइ हटस्पट एक Wi-Fi जडान जस्तै समान काम गर्दछ जुन तपाइँ तपाइँको कार्यालय वा घर मा पाउन सक्नुहुन्छ। वाइफाइ हटस्पटले इन्टरनेट जडान राखेर र अनौंठो वायरलेस उपकरण प्रयोग गर्दछ, उदाहरणका लागि राउटरहरू र मोडेमहरूका लागि, एक वायरलेस जडान उत्पन्न गर्न, जहाँबाट तपाईं स्मार्टफोन, ट्याबलेट, पीसी, वा वैकल्पिक उपकरण लिंक गर्न सक्नुहुनेछ।
एक वाइफाइ हटस्पटको गति, शक्ति, दायरा, र लागत फरक हुन सक्छ। अझै एक वाइफाइ हटस्पट पछाडिको सम्पूर्ण अवधारणा भनेको घरमा आधारित वाइफाइ नेटवर्क जत्तिकै हो, र तपाईं वाइफाइ हटस्पटमा लिंक गर्न र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै प्रकारले तपाईं आन्तरिक वाइफाइ नेटवर्क प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
वाइफाइ हटस्पट प्रकारहरू
AlThough WiFi हटस्पटहरू सामान्यतया समान हुन्, त्यहाँ केहि विभिन्न प्रकारका उपलब्ध हटस्पटहरू छन्, र तिनीहरूसँग केहि स्पष्ट भिन्नताहरू छन्।
सार्वजनिक वाइफाइ हटस्पट
सार्वजनिक वाइफाइ हटस्पट यस्तो देखिन्छ जुन त्यस्तै देखिन्छ। त्यस्ता हटस्पटहरू प्रायः हुन् - यद्यपि सबै समयमा होइन - प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुन्छ। स्थानहरू जस्तै क्याफेहरू, सार्वजनिक पुस्तकालय, खुद्रा पसलहरू, र अन्य त्यस्ता संगठनहरू र कम्पनीहरूले ग्राहकहरूको लागि निःशुल्क, सार्वजनिक वाइफाइ जडान दिन सक्छन्। केहि शहरहरूमा, नागरिक प्रबन्धनहरू वा ISP हरूले निश्चित क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक वाइफाइ जडानहरू निःशुल्क प्रदान गर्न सक्दछ। यी प्राय: सित्तैमा हुन्, अझै केहि क्षेत्रहरूमा, जस्तै एयरपोर्ट र होटेलहरूमा तपाईले सार्वजनिक वाइफाइ हटस्पटमा पहुँच गर्न पैसा तिर्नु पर्छ।
सेल फोन वाइफाइ हटस्पटहरू
त्यहाँ मोबाईल हटस्पट को प्रकारका छन्। उदाहरणका लागि, के तपाईंलाई थाहा छ तपाईले आईफोनलाई वाइफाइ हटस्पटको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? समान सबैभन्दा ठूलो Android स्मार्टफोनहरूको सही हो। मात्र तपाईंको फोनमा यस सुविधा खोल्नुहोस् र वाइफाइ हटस्पट सिर्जना गर्न यसको सेलुलर डाटा प्रयोग गर्दछ। पछि, तपाईं यो हटस्पटमा पीसी वा वैकल्पिक उपकरणसँग लिl्क गर्न सक्नुहुनेछ जुन सेलुलर डाटा समावेश गर्दैन।
साथै तपाईं उद्देश्य-निर्मित मोबाइल Wi-Fi हटस्पट खरीद गर्न सक्नुहुनेछ जुन सेलफोन डाटा जडानलाई शक्तिशाली वाइफाइ जडानमा स्विच गर्न अभिप्रेरित छ। व्यक्ति जो कामको लागि धेरै यात्रा गर्छन् वा जहिले पनि विश्वासयोग्य वाइफाइ जडानको पहुँच चाहिन्छ त्यस्ता उपकरणहरू मध्ये एकमा सामेल हुन सक्छ जुन धेरै मोबाइल फोन कम्पनीहरूबाट किन्न सकिन्छ।
प्रीपेड वाइफाइ हटस्पट सेलुलर हटस्पट जस्तै हो, अझै डाटाको सीमित मात्रा हुन्छ जुन तपाईंले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं यो डाटाको लागि प्रीपेड गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि तपाईंको म्याद सकिसकेपछि, तपाईं स्वतः अधिक खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। सेलुलर हटस्पट प्राप्त गर्ने यो उत्तम तरिका हो लामो समयदेखि मोबाइल डेटा सदस्यता बिना।
वाइफाइ हटस्पट प्राप्त गर्न सब भन्दा सरल विधि भनेको तपाईंको पीसी वा मोबाइल खोल्नुहोस् र खोजी सुरू गर्नुहोस्। धेरै सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा तपाईले याद गर्नुहुनेछ कि त्यहाँ धेरै खुला, सार्वजनिक वाइफाइ हटस्पटहरू छन् जुन तपाईले लि may्क गर्न सक्नुहुनेछ, नि: शुल्क। तपाईं वाइफाइ हटस्पटको लागि खोजी गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको आफ्नै ISP द्वारा प्रदान गर्ने।